‘वार्षिकोत्सव बहिष्कार गरेको होइन, साथीहरु कुरै नबुझि समाचार लेख्छन्’
‘वार्षिकोत्सव बहिष्कार गरेको होइन, साथीहरु कुरै नबुझि समाचार लेख्छन्’ लिला गिरी, उद्योग वाणिज्य तथा पर्यटनमन्त्री प्रदेश-५
जनतापाटी बिहीबार, माघ २३, २०७६ मा प्रकाशित
प्रदेश ५ को पर्यटन क्षेत्रको अवस्थाबारे केन्द्रित रही जनतापाटीले प्रदेशका उद्योग वाणिज्य तथा पर्यटनमन्त्री लिला गिरीसँग कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ–कुराकानीको सारसंक्षेपः
मन्त्री हुनुहुन्छ, प्रदेश ५ को स्थापना दिवसको कार्यक्रम नै वहिस्कार गर्नु भएछ, किन ?
–साथीहरु कुरै नबुझि हावाको तालमा समाचार लेख्छन् । कार्यक्रममा अनुपस्थित वा ढिलो उपस्थित हुने वित्तिकै बहिस्कार भन्ने हुन्छ ? काठमाडौंबाट संघीय पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराई लुम्बिनी आउनु भएको थियो । लुम्विनी, सिद्धार्थ गौतम वुद्ध विमान स्थल, नेपाल भ्रमण वर्ष, लुम्बिनी भ्रमण वर्ष आदी विषय छलफल गर्नु पर्ने थियो । हामी सबैजना त्यहाँ थियो । मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेल पनि हुनुहुन्थ्यो, भौतिक योजना मन्त्री वैजनाथ चौधरी पनि सँगै हुनुहुन्थ्यो । हाम्रो मिटिङ सकिएन । तपाईहरु छलफल गर्दै गर्नुस्, म जान्छु भनेर मुख्यमन्त्री जानु भयो ।
मुख्यमन्त्री प्रदेशको कार्यकारी प्रमुख भएकोले उहाँ समयमै पुग्नु पर्दथ्यो, हामी ढिलो गए पनि फरक पर्दैनथ्यो । त्यसैले सल्लाह मै मुख्य मन्त्री छिटो जानु भयो, हामी केन्द्रीय पर्यटन मन्त्रीसँग छलफल गर्यौं र ढिला पुग्यौं । त्यत्ति कुरालाई साथीहरुले समाचार बनाएछन् । कम्तिमा समाचारको पुष्टि त गर्नु पथ्र्यो, त्यो पनि गरिएन । यस्ता साथीहरुलाई के भनौँ र ?
नेपाल भ्रमण वर्ष सँगसँगै लुम्बिनी भ्रमण वर्ष पनि मनाइरहनु भएको छ, खासगरि चिनियाँ पर्यटकहरुलाई लुम्बिनी घुमाएर कार्यक्रम भ्रमण वर्ष सफल बनाउने योजना कोरोना भाइरसले असफल बनाइदियो होइन ?
–असफल बनाएको छैन र कार्यक्रम असफल हुने सम्भावना पनि छैन । हो, निकै चुनौति थपिदिएको छ, लक्ष्य पुरा हुँदैन कि भन्ने चिन्ता बढाएको छ । तर, भ्रमण वर्ष असफल हुने भन्ने त कुरै छैन नि १ वास्तवमा कोरोना भाइरसको बारेमा अलि बढी हो हल्ला भयो कि भन्ने मलाई लागेको छ । किन कि नेपाल अहिलेसम्म सुरक्षित छ । कसैलाई केही भएको छैन । सचेतता अपनाउनु पर्छ । तर, त्यसो भन्दैमा अहिले जसरी आतंक फैलिएको छ, त्यो चाँही अलि बढी भयो कि भन्ने मलाई लागेको छ । अनावश्यक हल्लाले हामीलाई मानसिकरुपमै कमजोर बनाएको छ । सचेत हुनुपर्छ, आतंकित हुनुहुदैन ।
जे भए पनि यसले पर्यटन आवागमन त ठप्पै हुने अवस्था आयो नि, यसले त सिंगो देश र तपाईहरुको प्रदेशको आर्थिक अवस्थालाई पनि नकारात्मक प्रभाव पार्दैछ नि, होइन ?
–कोरोनोको संक्रमण चीनबाट शुरु भएको हो र हाम्रो प्रदेशको सीमा चीनसँग जोडिएको छैन । भारतसँग जोडिएका मुख्य दुई नाका सुनौली र रुपैडियामा विशेष सर्तकता अपनाइएको छ । प्रदेशका अस्पतालहरु पनि सचेत अवस्थामा रहेका छन् । तर, अहिलेसम्म हाम्रो प्रदेशमा कँही कतैबाट कोरोना भाइरसको प्रभाव परेको छैन । तर, पर्यटक आउंदै नआएपछि सरकारले के गर्ने रु विदेशबाट आउने पर्यटकहरु नै नआएपछि हामीले केही गर्न सक्दैनौ । तिमीहरुको देश पो असुरक्षित छ, हाम्रो देश सुरक्षित छ, ढुक्क भएर आउ भनेर ग्यारेण्टि गर्न त सक्दैनौ । त्यसमाथि हामीले ग्यारेण्टि गरेर पनि हुँदैन, सम्बन्धित देशको सरकारको अनुमति चाहियो । त्यहीकारण पर्यटक आवागमन लक्ष्य अनुसार हुँदैन कि भन्ने लागिरहेको छ । तर, भरखर पहिलो महिना वित्यो । अझै ११ महिना सिंगै बाँकी छ । कोरोना भाइरसको आतंक पनि सधै नरहला, त्यसैले पर्यटक आवागमन घट्छ कि भन्ने लागे पनि अहिले नै आत्तिइहाल्नु पर्ने अवस्था छैन ।
पर्यटन प्रवद्र्धनको लागि प्रदेश सरकारले के काम गर्दै आएको छ ?
–पर्यटकीय हिसाबले प्रदेश ५ अत्यन्त धनी छ । हामीसँग पर्यटकहरुलाई कहां लगेर के देखाउने होला भनेर चिन्ता गर्नु पर्ने अवस्था छैन । लुम्बिनी र बर्दिया राष्ट्रिय निकुन्ज मात्र होइन, हरेक जिल्लामा केही न केही अति नै महत्वका पर्यटकीय स्थलहरु छन् । तपाईकहाँ गएर कति समय बस्ने भन्ने मात्र कुरा हो ।
हामीसँग पूर्वाधारहरुको पनि खासै कमी छैन । हरेक जिल्ला र पर्यटकीय स्थलहरुमा सडक सुविधा छ । खान बस्नको सुविधा छ । हो, कतिपय ठाउँमा तिनीहरुको स्तरोन्नति गर्नु पर्ने कामहरु छन् । तर, ती पनि क्रमिकरुपमा हुंदैछन् । गौतमवुद्ध अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । त्यो सँगसँगै अन्तर्राष्ट्रियस्तरका होटल रेष्टुराँहरु पनि खुलिरहेका छन् । पर्यटकहरुको रुची र व्यवहार अनुसारका सेवा दिने निकाय र व्यवसायहरु पनि सञ्चालन भैरहेका छन् । त्यसैले अब प्रदेश ५ पर्यटकको मुख्य गन्तव्य बन्नेछ भन्ने मलाई लागेको छ ।
अरु काम त गर्नुहोला, प्रदेशको नाम र राजधानी चाँही कहिले टुंग्याउनुहुन्छ ?
–प्रदेश सभाको यसपटकको वैठकले ती दुई कुरा टुग्याउंछ भन्ने मलाई लागेको छ ।
प्रदेशको नाम लुम्बिनी र राजधानी बुटवल नै हुने भो होइन ?
–त्यो प्रदेश सभाले टुंगो लगाउने कुरा हो । कुन ठाउँमा भनेर अहिलेसम्म टुंगिसकेको छैन ।